Raad Raac News Online – Dawladda Soomaaliya oo Casriyaynaysa hanaanka Mushahar bixinta
Dawladda Soomaaliya oo Casriyaynaysa hanaanka Mushahar bixinta
Faarax January 26, 2013 0
Wasiirka Dhaqaalaha iyo Qrshaynta Maxamuud Xasan Sulaymaan ayaa Sabahi u sheegay in barnaamijka uu yahay mid kamid ah dhowr horumarin oo looga dan leeyahay casiriyaynta hanaanka dhaqaalaha dalka, iyadoo la isku miisaamayo miisaaniyadda, lagulana dagaalamyo musuqmaasuqa maamul iyo kan dhaqaale.
“Waanu la dagaalami doonaa musuqmaasuqa maamul iyo kan dhaqaale, waxaanuna dhaqan galin doonaa qorshayaal noo ogolaanaya in aannu ururino canshuuro badan, aanana ilaalino balamaheena ahaa in aan u shaqayno dadka Soomaaliyeed,” ayuu Sulaymaan u sheegay Sabahi.
Dowladdu waa in ay qaadda talaabooyin badan si loo hagaajiyo dhaqaalaha shacabka oo qeyb ka ah dadaalo lagu dajinayo dhaqaalaha, ayay falanqeeyayaashu u sheegeen Sabahi.
Bashiir Mardaadi Saalax, oo ah dhaqaaleyahan ayaa sheegay in ay tahay in sharci la sameeyo si loo xaqiijiyo in mushaarka shaqaalaha rayidka ah lagu bixiyo si kaash ah si loo xasiliyo qiimahiisa marka la eego lacagaha ajaanibta ah. Xiligan, lacagaha ajaanibta ah ee ka shaqeeya Baanka Dhexe ayaa lagu qiyaasaa $170 milyan oo doolar waxa ayna dib u dhiagayaan qiimaha sii kacaya, ayuu u sheegay Sabahi.
Xigasho Sabahi Online